Navoaka sahady ny kinova Git 2.21.0 vaovao ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
git dia iray amin'ireo rafitra fanaraha-maso kinova malaza indrindra, azo antoka ary avo lenta, ary manome fitaovana fampandrosoana tsy mitongilana miorina amin'ny kinova sy merges.
Mba hiantohana ny fahamendrehan'ny tantara sy ny fanoherana ny fiovana farany, ny fanararaotana miharihary ny tantara rehetra teo aloha dia ampiasaina isaky ny asa ary ny sonia nomerika an'ny mpamorona tag tsirairay sy ny fanamafisana dia azo hamarinina ihany koa.
Navoaka vao haingana ny kinova vaovao an'ny rafitra fanaraha-maso loharanom-pahalalana Git 2.21.0.
Raha oharina amin'ny kinova teo aloha, fanovana 500 no natao tamin'ny kinova vaovao, nomanina niaraka tamin'ny fandraisan'anjaran'ireo mpamorona 74, izay 20 no nandray anjara tamin'ny fampandrosoana voalohany.
1 Git 2.21.0 Fampisehoana vaovao lehibe
1.1 Algorithme vaovao
2 Ahoana no hametrahana Git 2.21.0 amin'ny Linux?
Git 2.21.0 Fampisehoana vaovao lehibe
Ny safidy «– Daty = olombelona« nampiana amin'ny "git log" ary baiko hafa, mamela ny daty haseho amin'ny fomba fohy sy mora vakina.
Miaraka amin'izany azo atao ny misafidy ny endrika namboarina mifanaraka amin'ny taonan'ny hetsika. Ho an'ireo hetsika izay vao notanterahina dia aseho ny "N minitra lasa izay" (toy ny amin'ny "– Daty = havana"), ho an'ny fisehoan-javatra vao haingana dia haseho ny andro sy ny fotoana ary ho an'ny fanovana taloha dia andro, volana ary taona ihany.
Ankoatra izany, omena safidy «– Daty = auto: olombelona", izay tsy mampihatra ny endrika vaovao raha tsy rehefa alefa amin'ny terminal ary rehefa alefa amin'ny rakitra na didy hafa ny vokatra dia mampiasa ny format default.
Ao amin'ny baiko «git cherry-pick ", azo atao ny mampiasa ny safidy «-m"(tsipika lehibe) rehefa voalaza "Git cherry-pick -m1", izany hoe, mamela anao mamerina manolo-tena amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny ray aman-dreny voalohany amin'ity fanekena ity ho toy ny sampana iray amin'ny laharana lehibe. Amin'ny tranga hafa dia mbola hiseho ihany ny lesoka.
Mba hanatsarana ny zava-bita, ny baiko «git log -G«, Izay manao fikarohana fitadiavana matetika, tsy manao fikarohana rakitra mimari-droa raha tsy voafaritra mazava ny safidy«–Teks»Na aza mampiasa textconv.
Nampiana ny fanitsiana «http.version«, Izay Mamela anao hamaritra ny kinova tianao amin'ny HTTP protokolota ampiasaina rehefa manangona na mandefa fanovana. Ny tranokala dia mitaky tranomboky cURL vaovao.
Ny baiko "git worktree Delete" sy "git worktree move" dia azo ampiasaina izao raha misy submodules tsy natomboka tamin'ny hazo miasa (teo aloha ireo asa ireo dia tsy azo nampiasaina raha tsy nisy submodule).
Ny famaritana ny safidy "–format =" ho an'ny kinova, labels ary fikarohana rohy dia manitatra ny lisitry ny fananana ho an'ireo zavatra nalaina tamin'ny alàlan'ny object_info API.
Amin'ity famoahana vaovao an'ny Git 2.21.0 ity Ny fahaiza-misafidy tsy maintsy mampiasa algorithm hashing SHA-256 fa tsy SHA-1 dia nasongadina manolo-tena rehefa noforonina tamin'ny maody »NewHash« i Git.
am-boalohany Nokasaina hampiasa ny algorithm SHA3-256, saingy nifantoka tamin'ny SHA-256 ireo mpamorona, satria ny SHA2 dia efa ampiasaina amin'ny Git ho an'ny sonia nomerika.
Ny lojikan'ny safidy dia rehefa mampiasa SHA-256 sy SHA3-256 amin'ny kaody Git, ny fampandeferana ny iray amin'izy ireo dia hiteraka olana ara-piarovana, noho izany dia tsara kokoa ny miantehitra amin'ny algorithm iray fa tsy roa.
Ankoatr'izay, ny SHA-256 dia zaraina sy tohanana be amin'ny tranomboky crypto rehetra, ary mampiseho fahombiazana tena tsara koa.
Ny baiko «git checkout [tree-ish]» dia mamoaka ny isan'ny lalana alaina amin'ny index na hazo (object-ish).
Ny safidy "–keep-non-patch" dia ampiana amin'ny baiko "git quiltimport".
Nohavaozina ny fampiharana ny baiko "git diff –color-moved-ws".
Ny fanampiana ny sainam-pirenena "% S" dia nampiana "log –format" mba hanehoana hevitra momba ny niandohan'ny fidirana.
Ahoana no hametrahana Git 2.21.0 amin'ny Linux?
Ary farany, raha te hanavao na hametraka an'ity fitaovana ity ianao dia mila manokatra fantsona ao amin'ny rafitray fotsiny izahay ary manorata iray amin'ireto baiko manaraka ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka sahady ny kinova Git 2.21.0 vaovao ary ireto ny vaovaony